musha ASIAN FOOTBALL STORI Tora Kubo Kukura Kwemwana Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
Yakapedzisira Kugadziriswa pane April 9, 2020
LB inopa Nyaya Yakazara yeBhola Genius ine zita rekuti “The Japan Messi"Yedu Takefusa Kubo Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yezvinoitika zviitiko kubva paudiki hwake kusvika zvino.
Takefusa Kobo Nyaya Yekuchecheche Nyaya- Iyo Ongororo Kusvitsa. Kiredhiti Real Madrid Fans
Ehe, munhu wese anoziva kuti akakomborerwa neruoko rwakasarudzika rwetsoka, kutonga kukuru padyo uye ziso rechinangwa, chikonzero nei achidanwa kuti 'the Messi weJapan'. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezvaTriffusa Kubo's biography iyo inonakidza kwazvo. Iye zvino pasina kumbopfuurira mberi, ngatitangei.
Takefusa Kubo Zvechikoro Chemwana Plus Nhau dzeBritish Biography Chokwadi - Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Takefusa Kubo akaberekwa pazuva re4th raJune, 4 June 2001 kuvabereki vake; baba vake Tora Kubo naamai muguta reindasitiri reKawasaki, Japan.
Takefusa Kubo naBaba vake. Chikwereti kuWorldSportsHolic
Takefusa Kobo akarumbidzwa kubva kumhuri yepakati-yemhuri kumashure. Mhuri yake vane kwavakabva kwaKawasaki, guta reJapan rakakurumbira baseball, nhandare yemitambo, nhabvu, zvivakwa zveIndoor, bhasiketi uye kumhanya kwemabhiza.
Takefusa Kobo Dzinza Chemhuri
Mishumo kubva kuruzhinji rwevanhu inoratidza kuti Takefusa akakura ari iye oga mwana kuvabereki vake, asina munun'una (hanzvadzi) kana hanzvadzi (s).
Kukura uchitenderedza baba vanoda mutambo uye uchigara mune rimwe bhora-rakapenga guta rakagadzira maitiro echisikigo kwaari ekuda murudo nemutambo wakanaka. Pakutanga, akazviona aine chipo chechisikigo neicho cruise control kugona pane bhora.
Takefusa Kubo Zvechikoro Chemwana Plus Nhau dzeBritish Biography Chokwadi - Dzidzo neKubata Buildup
Kunyangwe kuti mhuri zhinji dzisimudze vana vadzo nechinangwa chekuti vadzidze & vawane mabasa asiri emitambo muJapan, vabereki vaToffusa Kobo vakasimbisa mwana wavo kuti arege kukanganisa dzidzo yake yebhora chero chinhu.
Pazera ramakore manomwe, Takefusa Kubo akatanga kutamba nhabvu yeFC Persimmon, mudzidzi wepanzvimbo inogara muguta rake reKawasaki.
Kuita kwake kwakamuona achidikanwa zvakanyanya nedzimwe dzidzo nzvimbo munharaunda yake, zvichikurudzira kuenda kuTokyo Verdi mu2008 neKawasaki Frontale mu2010. Panguva ino, akatanga kurota European academy nhabvu.
Kare ikako, vadzidzisi vake kuchikoro kwake vaiziva kuti Takefusa Kobo akagadzirirwa zvinhu zvikuru sezvo ivo vakamutarisa achiwedzeredza hunyanzvi hwake, zvisingaite mumwe mwana webhola. Saka paakabata mushe wekudana kunopinda mumiedzo nekirabhu yepamusoro yeJapan yakabatana neFC Barcelona, ​​kudada kwavo hakuna akaziva miganhu.
Takefusa Kubo Zvechikoro Chemwana Plus Nhau dzeBritish Biography Chokwadi - Hupenyu hwekutanga Hupenyu muEurope
Kuda kwaTrifusa pamutambo uyu kwakamuona achipfuura muyedzo yekudzidzira uye achijoinha timu yeYapani FC Barcelona's camp camp franchise timu muJapan. Akachengeta maitiro ake ekutamba semutambi iyeye aigona kufambisa vapikisi vekare sekunge ivo havana kuzombovapo.
MunaAugust 2009, Takefusa Kobo akapihwa MVP pamakwikwi aakatora mairi aine makore masere.
Torafusa Kubo- Wekutanga Makore Ekuchengeta Makore neFC Barcelona Franchise Academy
Haana kungomirapo. Zvingangoita gore rakatevera, muna Kubvumbi 2010, akasarudzwazve semunhu anoshanda senhengo yeFC Barcelona Chikoro chechikwata kuti atore chikamu muSodexo European Rusas Cup yakaitirwa kuBelgium.
Waizviziva here? Takefusa Kobo akapihwa imwe MVP mumakwikwi aya kunyangwe timu yake ichipedza chetatu. Vazhinji vakaona izvi sechiratidzo chinoratidza kuti achaenda kure.
Takefusa Kubo Zvechikoro Chemwana Plus Nhau dzeBritish Biography Chokwadi - Mugwagwa Mukurumbira Nhau
FC Barcelona iyo inozivikanwa pwere Academy, La Masia yakacherekedza zvaakabudirira muJapan. MunaAugust 2011, mudzidzi uyu akamukoka kuEurope kwemiedzo yaakapfuura nemiedzo mumhando dzinobhururuka. Pakubvuma, vakamutendera kuti atange Barca Alevin C (U11).
Waizviziva here? Munguva yake yekutanga yakazara (2012-13), Takefusa aive pamusoro achibudirira mumutambo wejunior achimisa zvibodzwa zve74 mumitambo ye30 chete (o hongu, wagona!. Tsvaga pazasi chikamu chidimbu chevhidhiyo chiratidzo chekuita kwake kwaanenge ari nimbled kuburikidza vapikisi vazhinji. Kiredhiti kuna AirFutbol.
Mushure mekuona vhidhiyo iyi, Tine chokwadi chekuti mave kubvumirana kuti zviri nyore kuwona kuti sei Putfusa Kobo achidanwa zita rekuti 'the Messi weJapan'. Isa chirevo mushure mekuverenga chinyorwa ichi kutiudza pfungwa dzako.
Pakati pemwaka we2014-15 mwaka, Takefusa Kobo akasimudzirwa kuBarca Infantil A (U14). Panguva ino, yake kutyaira uye kutsunga kwakava zvinhu zvake zvinokosha kwazvo. Kutora kwaTaffusa kwainge kwakafanana nekukwira kweRoll Royce yakasanganiswa neinjini yeAustang. Wese munhu akamuona ana izvozvo Lionel Messi hunhu hunoita bhora akasungirirwa zvakanyanya kana glued kuti makumbo ake. Chinhu chimwe chete chakatorwa naTaffusa Kobo kutora vatambi vaive vakuru kwaari uye vakuru kwaari.
Takefusa Kubo- Iyo Nzira Inoenda Mukurumbira Nhau. Kiredhiti kuna AquaVista
Mukumuka kwegore 2015, Barcelona yakauya pasi peiyo microscope ye FIFA mushure mekutyora zvirevo vachiri kusaina vatambi kuchikwata chevechidiki.
KwaTorafusa, nzira inoenda kuchikwata chekutanga yakatora zvinoshungurudza zvinorwadza apo FC Barcelona academy yakapihwa banza rekutamisa FIFA pane izvo zvainzi kusandudza kusabatana. Chikwata ichi chakarambidzwa kusaina Takafusa Kobo nokudaro achipa danho rekuti Barca ibudiswe kunze kwekirabhu.
Pakutanga, Kubo akapedza mwedzi mishoma yekupedzisira yenguva yake muSpain asingatambe nhabvu izvo zvakaita kuti atarisana nekuora mwoyo. Sezvo akange ave neizvozvi zvakakwana, akafunga kusiya kirabhu achidzokera kumusha kwake Japan. Ndichiri kuJapan, Kobo anga aine mutsva wevechidiki kutanga neFC Tokyo Youth timu.
Takefusa Kubo Zvechikoro Chemwana Plus Nhau dzeBritish Biography Chokwadi - Kumuka Mukurumbira Nhau
Takefusa Kobo kunyangwe kuJapan anga achiri akatsunga kuita danho repamusoro kudzokera kuEurope, panguva ino, HAKUNA neFC Barcelona yakamuodza mwoyo. Ndiri kuFi Toyko, tarenda yakasimukira yakakwidziridzwa kumakirabhu makuru, nguva inodada yevabereki vake.
Takefusa Kobo Rise kune Fame Nhau muFC Tokyo
Paakanga ari pamutambo weJapan achitamba nhabvu yepamusoro, Takefusa akatanga kutyora zvinyorwa. Waizviziva here? Akava iye Mudiki Mutambi & mudiki wevowo muJ-League Nhoroondo. Izvi zvairatidza kusvika kwake padanho rekuridza nhabvu yenhabvu.
Rwendo Rwokupedzisira kuEurope:
Kuita kwaTaffusa Kobo kwakamuona achiuya pane radar yeManchester City, Bayern Munich neParis Saint-Germain yaida iye kuti avonge nerutsoka rwake rworuboshwe, kudzora nekukasira uye ziso rechinangwa. Pakutanga, chibvumirano chinonzi chakaiswa kuti iye adzokere kuDhara Barçelona uyo panguva iyoyo akatanga kukumbira pamabvi avo kuti asainise.
Waizviziva here? Takefusa akanyatsoramba kudzoka kuFC Barcelona mukufarira kutamira kumukwikwidzi wayo, Real Madrid. Kuti asveze munyu mumaronda, Takafusa Kobo akabhadhara Real Madrid chete £ 1.78m kumusayina kubva kuFC Tokyo.
Takefusa ajoina Real Madrid
Takefusa Kobo sepanguva yekunyora akagadzirira ratidza kune nyika kuti iye inotevera inoshamisa chipikirwa chake chiJapan nhabvu chizvarwa shure kwerunyaya rwenyika Hidetoshi Nakata. Iye zvino vamwe, sezvavanotaura, yave nhoroondo.
Takefusa Kubo Zvechikoro Chemwana Plus Nhau dzeBritish Biography Chokwadi - Ukama Hupenyu
Nekusimuka kwake kumukurumbira uye kujoina Real Madrid, vateveri vazhinji vakabvunza mubvunzo uyu; Who is Putfusa Kobo's Girlfriend kana WAG?.
Ndiani musikana waToffusa Kobo? - Chikwereti kuna chinja musika
Sezvenguva yekunyora, izvo zvinogona kuvanzika zvekudanana kweTrumpfusa ndiyo imwe inopukunyuka kuongororwa kweziso reruzhinji nekuda kwekuti hupenyu hwake hwerudo ndehwakavanzika uye pamwe nemutambo-wakasununguka. Zvinotaridzika Takefusa akamboda kuisa pfungwa pabasa rake uye akatsvaga kuti asataridza mukana paupenyu hwepachivande. Ichi chokwadi chinoita kuti zviome kune blogger kuziva Takefusa Kobo anoda hupenyu uye kufambidzana nhoroondo.
Nekudaro, nekuda kwehudiki hwake uye kuwanikwa nekirabhu yakakura kwazvo munyika iyo isingaregererwe kune vechidiki vasingakwanise kufadza, zvinogoneka kuti Putfusa angave asina kuroora uye anogona kunge asiri kufambidzana nemumwe munhu. Kunyangwe tichiona vanhu vechidiki vezera rake vachidanana, saka, tinogona kungofungidzira kuti anogona kunge aine musikana wake asi anofarira kwete kuzviita pachena.
Takefusa Kubo Zvechikoro Chemwana Plus Nhau dzeBritish Biography Chokwadi - Upenyu hwehupenyu
Kusvika pakuziva hupenyu hwePutfusa kwaizokubatsira iwe kuwana mufananidzo uzere wehunhu hwake kure negomba rekutamba.
Kure kubva munhandare yenhabvu, Takefusa iri kuverenga, nyoro, inodanana, inosimudzira, haina kumbobvira yafinha uye inokwanisa kuenderana uye nekukurumidza kudzidza kuchinja munharaunda nemagariro.
Tora Kubo Hupenyu Hwechokwadi Hupenyu. Kiredhiti BeSoccer
Takefusa Kobo anogara achifadzwa pamwe nenyika pachayo. Anonyanya kuda kuziva, nekuramba achinzwa kuti hapana nguva yakakwana yekuti arurure kune vateveri veMadrid kuti akanaka sei.
Takefusa Kubo Zvechikoro Chemwana Plus Nhau dzeBritish Biography Chokwadi - Upenyu hweMhuri
Takefusa ane hushamwari uye anofarira kushandisa nguva neshamwari uye mhuri, kunyanya nhengo dzechidiki. Mhuri yakakosha kwazvo kwaari uye kushandisa nguva kuvaka hukama hwakasimba hwepamoyo navo.
Takefusa Kubo Hupenyu Hwemhuri
Nepo nhepfenyuro ichitora ruzivo rwababa vake, ruzivo shoma rwuripo nezve amai vake. Zvinofungidzirwa kuti mumurume waTrifusa Kubo ana vakaita sarudzo yekuziva kusatsvaga kuzivikanwa neruzhinji.
Takefusa Kubo Zvechikoro Chemwana Plus Nhau dzeBritish Biography Chokwadi - LifeStyle
Kufunga pakati pekuita uye kunakirwa parizvino haisi sarudzo yakaoma yeTrumpfusa.
Kunyangwe achitenda kuti kuita mari munhabvu zvakaipa zvakaipa. Takefusa ane chikonzero chakasimba chekuchengeta mari yake achiongorora uye akarongeka. Sezvo panguva yekunyora, haararame hupenyu hwakajeka uye hunowonekwa nyore nevashoma emota dzinodhura sezvinoonekwa pazasi.
Takefusa Kobo Mararamiro echokwadi. Chikwereti kune Chinangwa.
Takefusa Kubo Zvechikoro Chemwana Plus Nhau dzeBritish Biography Chokwadi - Untold Facts
Iyo Year TakeFusa yakazvarwa: Chiitiko chinotevera chakaitika;
Gore iro, chaizvo munaSeptember 11, 2001, inozivikanwa se9 / 11 kurwiswa kwakaitika. Gumi nepfumbamwe mahure panguva imwe chete iyoyo vakatora maneya mana eUS ekutengeserana enhandare dzakapaza maviri e ndege muWorld Trade Center muManhattan, New York City.
Mwaka 2001 waizivikanwa se "Zhizha reGore reShark". Iri gore rakanyora nhamba yepamusoro yeiyo shark kurwisa kufa.
Negore iro 2001, Makambani eMishonga epasi rese anotendera kutengesa zvinodhaka zveAids pamutengo uri pedyo muAfrica, mutengo unosvika ku90% wekubatsira kurwisa chirwere chinouraya.
Pa 26th yaJanuary gore iro, kudengenyeka kwemusango kuyera 7.9 paRicher wadogo jolted Gujarat yeIndia, kuuraya vanhu vanosvika 20,000 uye kukuvadza kusvika kune 167,000 vamwe.
Takefusa Kubo Zvechikoro Chemwana Plus Nhau dzeBritish Biography Chokwadi - Video Summary
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nekuverenga yedu Takefusa Kobo Childhood Nhau uye Untold Biography Chokwadi. At LifeBogger, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukawana chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka, tapota shandisa nesu nekupindura pasi apa. Tichagara tichikoshesa uye tichiremekedza pfungwa dzako.
Yakagadziridzwa zuva: Chivabvu 4, 2020